1. Ngo-2013, ISebe leMfundo esiSiseko (ISebe i-DBE) laqulunqa umgaqo-sikhokelo weKharityhulam, i-South African National Curriculum Framework (NCF) NCF) for children from Birth to Four. Lo mgaqo-sikhokelo wekharityhulam kazwelonke ujolise ekuphuculeni umgangatho wemfundo esisiseko ngokumisela isiseko esiluqilima kwakwiminyaka yasekuqaleni. Ukwabonelela nangesikhokelo sokwenza iiprogram zokufunda nezokusebenza neemveku nabantwana abancinci ukususela ekuzalweni kwabo ukuya kwiminyaka emine yokuzalwa. Ukwalungele nokusetyenziselwa iimekobume, iinjongo nabathathi nenxaxheba abaziindidi ezininzi. I-NCF inokufumaneka kweli ziko lewebhu leSebe iDBE: https://tinyurl.com/m99omqf
2. Kugunyaziswe amaSebe eMfundo amaphondo ukuba aziqeqeshe zonke iipraktishina zeBakala eliphambi kweBakala R (pre-Grade R practitioners) kwi-NCF engadlulanga u-2019 ngokwethagethi ezimiselwe liSebe i-DBE.
3. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (ISebe iWCED) lenze izicwangciso zoqeqesho lweNCF kwiphondo ngokubanzi lwazo zonke iipraktishina zeBakala eliphambi kweBakala R ukususela kuJulayi 2017 ukubheka phambili. Aya kunikwa ithuba lokubakho kolu qeqesho lweNCF amaqela awahlukileyo eepraktishina zeBakala eliphambi kweBakala R ngamaxesha awahlukileyo kwithuba leminyaka emibini ezayo.
4. IiKholeji zaseNtshona Koloni ii-Western Cape Technical and Vocational Education and Training (TVET) Colleges ziya kuqhuba olu qeqesho lisebenzisana neSebe iWCED.
5. Oomasifundisane bokuqala ababini baya kuqhubeka ngolu hlobo lulandelayo:
IQela 1: Umasifundisane weentsuku ezintlanu
ukususela kwi-03 ukuya kwiJulayi 2017
Ngo-08:00 ukuya ku-16:00 Uqeqesho lwangoJulayi 2017 sisigaba sokuqala soqeqesho lweNCF. Olu lolweepraktishina ezinamabanga emfundo ii-ECD L4 practitioners neenqununu zamaziko e-ECD abhalisiweyo kwiSebe iWCED kunye nakwiSebe i-DSD.
IQela 2: Umasifundisane weentsuku ezintlanu
ukususela kwi-10 ukuya kwi-14 Julayi 2017
Ngo-08:00 ukuya ku-16:00
6. Ukubhalisela uqeqesho lweNCF lwangoJulayi 2017
6.1 Umhla wokugqibela wobhaliso ngumhla we-31 Meyi 2017.
6.2 Ziyacelwa iinqununu zamaziko e-ECD abhaliswe neSebe iWCED kunye neSebe i-DSD, zizibhalise zona kwakunye neepraktishina zeBakala eliphambi kweBakala R ezinamabanga emfundo (qualified pre-Grade R L4 practitioners) (ezifundisa abantwana ukususela ekuzalweni kwabo ukuya kwiminyaka emine) ukulungiselela uqeqesho lweNCF kwi-TVET College ekufutshane nazo. Ikopi yesatifikethi se-ECD L4 sepraktishina nganye mayihanjiswe nefom yobhaliso.
6.3 Lonke ubhaliso luya kwenziwa zii-TVET Colleges ezidweliswe kwi-siHlomelo B. Akukho lubhaliso luya kuqhubeka kwii-ofisi zezithili zeSebe iWCED.
6.4 Indawo ezikhoyo (spaces) kuqeqesho zilinani eliqingqiweyo. Ubhaliso luya kwenziwa ngokuthi kuqwalaselwe abafike kuqala yaye iSebe iWCED kunye/okanye i-TVET College inelungelo lokumisela oku kulandelayo:
amanani ngokweziko le-ECD ngalinye; kunye
nokwabiwa kwamaqela ngokweeveki zoqeqesho.
6.5 Obhalise ngokuyimpumelelo uya kufumana ingqinisekiso nge-SMS okanye nge-imeyili zingadlulanga iintsuku eziyi-14 zomsebenzi ifunyenwe ifom yobhaliso. Ukuba inqununu ayifumenanga ngqinisekiso yokubhaliswa kwabo, imele ukuqhagamshelana ne-ofisi yeTVET ungadlulanga owe-15 Juni 2017 ukufumana inkcazo ngokuqhubekayo malunga nokubhaliswa kwabo.
6.6 Ngabathathi-nxaxheba ababhalisileyo kuphela abaya kulungiselelwa kuqeqesho njengoko kuya kwenziwa amalungiselelo okuqhubeka kolu qeqesho ngokufanelekileyo.
6.7 Iziphungo nesidlwana sasemini, ziya kubonelelwa kulo masifundisane. Abathathi-nxaxheba abaneemfuno ezizodwa zezidlo ezithile baya kulungiselelwa kangangoko kunokwenzeka; nakuba kunjalo, kucetyiswa bonke abathunywa ukuba beze nezinto eziziimfuno ezizodwa/ezongezelelweyo abazifunayo.
6.8 Akukho nkxaso-mali iya kuhlawulelwa izithuthi zokukhwela. Ngako oko kucetyiswa ukuba abathathi-nxaxheba bakubhalisele ukubakho kuqeqesho kwelona ziko loqeqesho likufutshane.
6.9 Le fom yobhaliso iqhotyoshelweyo (isiHlomelo A) mayizaliswe yaye ibuyiselwe kwikholeji i-TVET College echaphazelekayo ungadlulanga owe-31 Meyi 2017.
7. Yonke imibuzo emalunga nobhaliso lwangoJulayi 2017 mayithunyelwe kwi-TVET College echaphazelekayo ekwisiHlomelo B.
8. Yonke eminye imibuzo malunga noqeqesho lweNCF imele ukubhekiswa kumagosa e-ECD eSebe iWCED adweliswe kwisiHlomelo C.
9. Emva kwalo masifundisane weentsuku ezintlanu, kuya kulindeleka ukuba bonke abathathi-nxaxheba bazijongisise kwakhona iiprogram zabo zemihla ngemihla kwakunye neeprogram zokufunda zabo ukuqinisekisa ukuba zingqinelana ne-NCF.
10. ISebe iWCED likujonge ngethemba oku kuqaliswa kolu qeqesho lweNCF eNtshona Koloni, lisebenzisana nee-TVET Colleges, yaye lizimisele ukuzisa uqeqesho lweNCF olusemgangathweni kubo bonke abathathi-nxaxheba ababhalisiweyo.
11. Iinqununu zamaziko e-ECD abhalise neSebe iWCED kunye/okanye neSebe i-DSD ziyacelwa zazise ngokuqulethwe yile ngcaciso imfutshane kuzo zonke iipraktishina zeBakala eliphambi kweBakala R ukwenzela uze ziyithathele ingqalelo, ngakumbi iipraktishina ezinamabanga emfundo ezizii-ECD L4 practitioners, yaye maziqinisekise ukuba zinikwa ithuba lokuya kolu qeqesho lungayi kuphindwa lwangoJulayi 2017.
IsiHlomelo B: "List of TVET college NCF training venues and contact persons" (ubukhulu: 34 KB)
IsiHlomelo C: "List of WCED contact persons" (ubukhulu: 27 KB)